लगाउने हो ४ लाखको हिरा जडित मास्क ? « Sansar News
३० असार २०७७, मंगलवार १३:०५
३० असार । भारतको पुनेका एक व्यक्तिले केही समय अघि एक व्यक्तिले सुनको मास्क लगाएको खबर सनसनी भएको थियो । फेरि भारतमा हिराजडित मास्कको चर्चा चलेको छ । भारतको गजुरातस्थित सुरत गहना पसलले सुनको मास्कपछि डायमण्ड जटित मास्कहरु बिक्री सुरु गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको उत्पति भएदेखि यता भारत केन्द्र सरकारले सार्वजनिक रुपमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिसकेको छ । मानिसहरुले विभिन्न रंग, प्रकार र अद्वितिय ढाँचाको मास्क लगाएका देखिन्छ ।
सुरतमा एक गहना पसलका मालिकले हिरा जटित मास्कहरु बिक्री गरिरहेका छन्, जसको मूल्य १ लाख ५० हजार देखि ४ लाख सम्म रहेको छ ।
पसलका मालिक दीपक चोकसीका अनुसार सरकारको निर्देशन बमोजिम मास्क लुगाबाट बनेका छन् । अमेरिकी हिराको साथमा मास्कमा पहेँलो सुन प्रयोग गरिएको छ । र यसको मुल्य १ लाख ५० हजार रहेको छ । सेतो सुन र वास्तविक हिराले बनेको अर्को मास्कको मूल्य ४ लाख रहेको छ ।
विवाह गर्ने ग्राहकले दुलहा र दुलहीका लागि अनौठो मुखौटा मागेपछि हीराको मास्क बनाउने विचार आएको सुरतका मालिकले बताए । ‘हामीले हाम्रो डिजाइनरहरूलाई मास्कहरू सिर्जना गर्न भनेका थियौं र ती ग्राहकले खरीद गरेका थिए । यसपश्चात, हामीले यी मास्कहरूको विस्तृत श्रृंखला बनायौं जुन आउँदो दिनमा मानिसहरू उनीहरूलाई आवाश्यक हुन्छ । शुद्ध हीरा र अमेरिकी हीरा सुनको प्रयोग गरिएको छ ।’ चोकसीले भने ।
पसल मालिकका अनुसार मास्कमा भरिएका रत्नहरु हटाउन सकिन्छ र अन्य गहनाहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हिराले भरिएका मास्कको केही तस्विरहरु सामाजिक सञ्जाल टिव्टरमा भाइरल भएका छन् । केही व्यक्तिले यस्तो मास्कको आवश्यकता माथि प्रश्न गरेका छन् भने केहीले यसलाई जोक्सका रुपमा शेयर गरेका छन् ।
Gujarat: A jewellery shop in Surat is selling diamond-studded masks ranging between 1.5 lakhs to4lakhs. Owner of the shop says, “As lockdown was lifted,acustomer who hadawedding at his home came to our shop & demanded unique masks for bride & groom.” #COVID19 pic.twitter.com/Oz5ShitRKj